Basic Rules For Getting Rich - Rule 2
Basic Rule For Getting Rich - Rule 1
Posted: 27 Jun 2012 09:02 AM PDT
Posted: 28 Jun 2012 11:04 AM PDT
Korean actress Han Hyo-joo modelling for Viki's [Kr] 2012 S/S fashion collection. These pictures were released in April, so it's probably more for spring rather than summer.
Han Hyo-joo Viki 2012 S/S from YeinJee's Asian Journal
"ကန်စွန်းရွက်ကြော်က ဘာအသားမှ မထည့်နဲ့။ သက်သတ်လွတ်နော်"
သက်သတ်လွတ် သမားဟာ သက်သက်လွတ်စားရခြင်းက ဘာသာရေးကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဒီလိုအတွေးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ "လူတွေဟာ အသိဥာဏ် အကြီးဆုံးဖြစ်လို့
ကိုယ့်လောက်အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေကို ညှာသင့်တယ်"
လူမျိုးခြားနဲ့ ယူပြီဆို များသောအားဖြင့် မေးခွန်းတွေ ထုတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့လို မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် အမေးခံခဲ့ရတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုက "လူမှာ လူကောင်းရယ် လူဆိုးရယ်ပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်ယူတဲ့သူက ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူသဘောတူ လူကောင်း တယောက် ဖြစ်နေရင် ပြီးပြီ" ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးကိုတော့ မဖြေခဲ့ပါဘူး။ လူမျိုးမခွဲခြားတဲ့ အဖြေမျိုးအစား အင်္ဂလိပ်တွေ ကြားမှာနေရင် အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ ရဖို့များတယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြေသွားတော့…မေးခွန်းထုတ်သူက အပြစ်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ မွေးခွန်းထုတ်လာရာမှာ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ယူခြင်းဟာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ဖြေမယ့်အစား အဲလိုလုပ်ရတာဟာ အခြေအနေတွေ တွန်းပို့လို့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးမှာ လူထုထောက်ခံမှု နည်းသွားမှာ စိုးရိမ်လို့လို့ နားလည်လိုက်မိပါတယ်။
Racists တွေဟာ လူမျိုးခြားနဲ့ ယူခြင်းကို အကြောင်းများစွာ ပြပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လေ့ ရှိပါတယ်။ အတွေးအခေါ် ကျယ်ပြန့်သူ တယောက်အတွက် ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါ။ [လူမျိုးရေး ခွဲခြားတတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင်တော့]လူမျိုးခြားကို မယူသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို မရမက ရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင် တခုတည်းပဲ ရှိပါတယ်။ မွေးလာမယ့် ကလေး ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရမှာ၊ အပယ်ခံရမှာကြောင့် ကလေးကို ဒဏ်မခံစေချင်လို့ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံမှာ လူတယောက်ယောက်က ဆိုးဝါးတဲ့ အပြုအမူကို လုပ်ပြီဆိုရင် "မင်း…ဗမာ မှ ဟုတ်ရဲ့လား" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး၊ "မင်း…အမျိုးမှ စစ်ရဲ့လား" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးဟာ တခြားလူမျိုး မှန်သမျှကို၊ ကပြားမှန်သမျှကို ယုတ်မာသူ၊ ဆိုးသွမ်းသူ၊ ဗမာအားလုံးသည်သာလျှင် ယဉ်ကျေးသူ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေမှာ အခြေခံနေပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင်တော့ ဗွီဒီယို တခုထဲမှာ ဗမာ အမျိုးသားတွေက ဗမာ အမျိုးသမီးတွေကို ဗမာလိုတွေ ပြောပြီး ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက် နေကြတဲ့ဟာမျိုးကို မြင်ရတာတောင် ဗမာတွေ ဟုတ်ရင် ဒီလို မလုပ်ဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးထားတာမျိုး ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ လူအများစုရဲ့ အယူအဆကို လေ့လာကြည့်ရင်လည်း ခွဲခြားချင်တဲ့ သူတွေ ပိုများနေတာကြောင့် အနာဂတ်မှာလည်း အဲဒီ့သဘောမျိုးတွေပဲ ဆက်လက်ကြီးစိုး နေဖို့များတာမို့ လူမျိုးခြားကို မယူသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတခုကို မပေးမနေရ ပေးရမယ်လို့ ဆိုလာခဲ့ရင် မွေးလာမယ့် ကလေးကို လှောင်ပြောင်မယ့် ဒဏ် မခံစားရ စေချင်လို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာရဲ့ တကယ့် အဖြေအစစ်ကတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ကင်းရှင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခု ဖြစ်လာမှသာ ပြဿနာတွေ အားလုံး ပြေလည်သွားမှာပါ။
ထားပါတော့။ သေချာတာကတော့ ဒီလူတွေဟာ နယ်နိမိတ် စည်းမျဉ်းရဲ့ တဘက်ဘက်က မြေကြီးပေါ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာတော့ သေချာတယ်။ သူတို့မွေးတဲ့ နေရာက ကောင်းကင်ဘုံတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ မြေကြီးပေါ်က တနေရာမှာ မွေးပါလျက် ဘယ်နိုင်ငံက မြေကြီးကမှ သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး၊ သူတို့ကို လက်မခံဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မဆိုင်တဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာ နေထိုင်ရခြင်းကို "ကျူးကျော်သူ" လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဘဝက "မွေးရာပါ ကျူးကျော်သူ"၊ သူတို့ မွေးလာခြင်း၊လူဖြစ်လာခြင်း ကိုက ကျူးကျော်ခြင်း၊ ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းလို ဖြစ်နေတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ မွေးဖွားလာသူ တယောက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာမှ တရားဝင် လူဖြစ်ခွင့် မရခြင်းဟာ ကမ္ဘာ့စနစ်ကြီးဟာ ဘယ်လောက် ချွတ်ယွင်း နေသလဲဆိုတာကို ပြနေတယ်။ ကမ္ဘာ့စနစ်ကြီး ဘယ်လောက်အထိတောင် ချွတ်ယွင်းနေသလဲ ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခသည် ဦးရေဟာ ၁၂ သန်းလောက် ရှိနေတယ်လို့ ဆိုတယ်။
မကြာခင်က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာလည်း လူမျိုးရေးမီးတောင် ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်ပြီး တချို့လူတွေက ပြောကြတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရပဲ ရတတ်တယ်တဲ့။ အဲဒါက မှန်သလိုလို ရှိပေမဲ့ တကယ်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ "မင်းတို့နဲ့ ဒါပဲ တန်တယ်၊ ဒါပဲယူ" ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ သာမန် ပြည်သူတွေ ဆိုတာဟာ နေရာတကာမှာတော့ ဗဟုသုတတွေ ပြည့်စုံနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူလို ကိုယ်လို ပါပဲ။ အဖြူထည်တွေ ပါပဲ။ ကွာသွားတာက ခေါင်းဆောင်နေရာ ရယူနေကြတဲ့ အလွှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်တော့ မီဒီယာ၊ အင်တာနက်သုံးနိုင်သူ၊ တခုခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ၊ ပရိသတ်ရှိသူ အဲလို လူတွေ အားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။ ခြုံငုံပြီး အပေါ်ယံအလွှာလို့ ကျနော် သုံးလိုက်ပါမယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ အဲဒီ့ အပေါ်ယံလွှာ အင်အားစုကြီးရဲ့ ပျမ်းမျှ အရင်အချင်းနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ဟာကို ရနေတာလို့။ ပြည်သူဆိုတာက မှန်ချင်တဲ့ အခါ မှန်မယ်။ လမ်းလွဲကို ပို့ခံရရင် မှားချင်တဲ့ အခါ မှားသွားနိုင်တယ်။ ဥပမာ ပြည်သူအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေတာမျိုး၊ ပြည်သူက ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့် နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ မှားတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူကို အပြစ်တင်လို့တော့ ရမှာမဟုတ်ပါ။ ထူးလာမှာလည်း မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ..အပေါ်ယံလွှာက လူတွေက အမှန်တရားကို မပြောပဲ အမှားတွေဆီကိုပဲ တွန်းပို့နေမယ် ဆိုရင် ပြည်သူတွေဟာ လမ်းကြောင်းအမှားပေါ် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုအခါမျိုးမှာ အပြစ်တင်သင့်တာက ပြည်သူမဟုတ်ပါ။ ပြည်သူတွေက ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပညာတတ် လူတန်းစားတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအရည်အချင်းကသာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲလို တံဆိပ် လိုက်ကပ်သူတွေဟာ သူတို့စိတ်နဲ့ သူတို့ နှိုင်းလိုက်ကြတာပါ။ သူတို့မှာ ကိုယ့်အတ္တအတွက်ပဲအမြဲတွေးနေတော့ သူများက အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ကချင်မဟုတ်ဘဲ ကချင်အကြောင်းပြောတာမျိုး၊ ချင်းမဟုတ်ဘဲချင်းတွေဘက်ကစာနာပြီး ပြောတာမျိုး Gay မဟုတ်ဘဲ Gay rights ကို ပြောတာမျိုး၊ ထိုင်းတယောက်က ဗမာဘက်က ဝင်ရပ်လိုက်တာမျိုး အဲဒါတွေကို သူတို့ ဘယ်လိုမှ တွေးတတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ လိုက်တွေးပြီး "မင်းက မြန်မာမှ ဟုတ်ရဲ့လား" "မင်းက…ကချင် မို့လို့ ဒီစကားမျိုးပြောတာ" "ကုလား ပါးစပ်က ဒီစကားမျိုးပဲ ပြောမှာပဲ" စသည်ဖြင့် စကားရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ မှန်မမှန်ကို မစဉ်းစားတော့ဘဲ အိုးနင်းခွက်နင်း တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။
အဲလို ပညာတတ် ဆိုသူတွေရဲ့ ကလေးကွက်တွေကို တခုချင်း လိုက်ဖြေရှင်းနေရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ပြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းကိုတော့ ခရေငယ်က ကျနော့်ကို ပြောပြထားပါတယ်။ "Debate လုပ်တဲ့နေရာမှာ…ကိုယ့် Comment အောက်မှာ တခြားလူ Comment တခု ရောက်လာတိုင်း ရှုံးတာမဟုတ်ဘူး ဦးကိုရဲ့။ သူပြောတဲ့ အကြောင်းအရာက ကိုယ်အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို ချေဖျက်နိုင်မှ . . .သူက မချေဖျက်နိုင် ဘဲနဲ့ ရေးလာရင်၊ သူရေးလာတာက ဆွေးနွေးတဲ့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ပြန်ရေးနေလည်း စကားတွေဖောင်းပွတာက လွဲလို့ ဘာမှမထူးဘူး . . အဲဒီ့တော့ ဘာမှထပ်ရေးပေးဖို့ မလိုဘူး"
Posted: 28 Jun 2012 05:26 AM PDT
2) Makeafamily decision 62% of couples don't agree on their expected retirement age. The age at which each of you will retire determines how much money you'll need. If you're among the multitude of couples that the Fidelity survey (cited above) found were not on the same page, make some time to talk with your partner about when you'll quit and what you'd like your life to be like.
Posted: 28 Jun 2012 05:22 AM PDT
1. Focus on what is most important ThinkstockIn achieving wealth, how you invest isn't nearly as important as how much you save. Say you're 40, have $200,000 saved, with 60% in stocks, and are putting away 10% ofa$100,000 salary (including company match). You havea52% chance of retiring with 70% of your pre-retirement income, according to T. Rowe Price. Boost your stock stake to 80%, and your chances improve modestly, to 57%. But if you boost your savings to 15% instead, you get to 69%. [Related: Jobs with high lifetime earnings] Message: Stretch to save the most you can. Source: Yahoo Finance
Posted: 28 Jun 2012 08:04 AM PDT
"Dia (Maira) ditahan di Dubai sekarang. Dia diwakili oleh tiga firma undang-undang AS dan dia memiliki firma hubungan Awam berpengkalan di New York untuk membantu pertahankan imejnya," kata sumber itu kepada FMT.
"Dia ditahan di Lapangan Dubai pada 22 Jun," kata sumber itu lagi.
Daniyar's mom arrested in Dubai?
PETALING JAYA: Maira Nazarbayev, mother to Prime Minister Najib Tun Razak's future son-in-law Daniyar Nazarbayev, is believed to have been arrested in Dubai as she was about to fly off to Europe foravacation.
A source familiar with the investigation against the 50-year-old Kazakhstan native told FMT that she was arrested on Friday by the Dubai police based onawanted notice issued by Interpol, acting on behalf of the Kazakhstan's Ministry of Internal Affairs.
"She is being held in custody in Dubai now. She is represented by three US law firms and she hasaNew York-based PR firm to help her protect her image," the source told FMT.
"She was arrested at the Dubai airport on June 22," added the source.
She had said that American media reports about the Interpol "wanted" notice were completely inaccurate. Photographs of her in both the New York airport and the Dubai airport were also sent to media organisations to show that she was free to travel.
Her son Daniyar is engaged to Najib's daughter Nooryana Najwa.
She also dismissed claims that she was wanted in Kazakhstan "for various crimes, including kidnapping, use of threats of physical harm to extract funds fromabusiness associate, and using criminal threats to force another person to transfer real property to the name ofafamily associate".
Until press time, there had been no confirmation from the Dubai police and Torossian on Maira's status. -FMT
Posted: 28 Jun 2012 04:12 AM PDT
Source: ဒေါက်တာလှိုင်မိုး- "မျိုးချစ်အဓိကလား၊ လူချစ်အဓိကလား ( ဒေါက်တာလှိုင်မိုး )"
"ယနေ့အခါတွင် မျိုးချစ်စိတ်ဟု စကားလုံးသုံးရတော့မည့် ကာလမဟုတ်တော့ချေ။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဟုသာ အသံကျယ်ကျယ် ပြောရမည့်ကာလဖြစ်သည်။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည့်ကာလ ဖြစ်သည်။ မျိုးချစ် မျိုးချစ်ဟု လူမျိုးတိုင်းက အော်ဟစ်နေလျှင် တိုင်းပြည် မငြိမ်းချမ်းနိုင်။ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း မငြိမ်းချမ်းနိုင်။"
"လူအားလုံးကို လူလို့သာ တန်ဖိုးထားကြရမည်။ Globalization ဖြစ်တည်နေသောကာလတွင် လူသားအားလုံးကို တန်ဖိုးထားရုံသာမက အခြားသောသက်ရှိများနှင့် သက်မဲ့သြကာသလောကကြီးကိုပင် တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းကြရပေလိမ့်မည်။"
"မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်သည် သာမညနေရာတွင်ထား၍ လူချစ်စိတ်ဓာတ်ကို အဓိကအနေဖြင့် မွေးမြူကြရပေလိမ့်မည်။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားရေးအမြင်နှင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်များ ရှင်သန်ကြရမည်ဖြစ်သော်လည်း လူချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြင့် နှလုံးသားတွင် ကိန်းအောင်းကြမှသာ ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်ထွန်းပေလိမ့်မည်။"
သည်ဆောင်းပါးကို ရေးရန် လက်တွန့်နေခဲ့သည်မှာ အတော်ကြာပေပြီ။ ရေးရန် အချိန်အတော်ယူခဲ့ရပေသည်။ တစ်ဖန် မိမိ၏ အယူအဆသည် မိမိဘာသာမှန်သည်ဟု အထင်ရှိစေဦး အကျိုးနှင့်အပြစ် ဘယ်သင်းက ပိုမိုများနေပါသလဲ၊ စဉ်းစားရပြန်ပါသည်။ အကြောင်းတွေကရော ခိုင် လုံပါ၏လော တွေးတောရပြန်ပါသည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်ခန့်(၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးအခင်း မဖြစ်မီ သုံးနှစ်အလိုခန့်က) ကာလကစာရေးသူသည် 'ဒေါင်း' စာပေမှထုတ်သော 'အတွေးအမြင်' မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ၀ယ်ယူဖတ်ခြင်းသာမက စုဆောင်း၍ပါ ထားသည်။ အခြားမဂ္ဂဇင်းနှင့် အခြားသုတရသစာများလည်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။တစ်နေ့သောအခါတွင် ထူးထူးခြားခြား စာတစ်အုပ်တွင် 'မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ပပျောက်စေ၊ လူချစ်စိတ်ဓာတ်ကျရောက်စေ'ဟူသော စာစုကို ဒေါက်တာမောင်ဖြူး (Ph.D) က ရေးသားထားလေသည်။ ဖတ်လိုက်ရသောအခါ ကျွန်တော့်အတွေး ချာချာလည်သွားသည်။
စာရေးသူတို့အနေဖြင့် 'မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် မွေးမြူရမယ်'လို့သာ ငယ်ငယ်ကတည်းက စွဲခဲ့ကြသည်ကိုး။ အတွေးနယ်ချဲ့ရပါတော့သည်။ နီးစပ်ရာ အပေါင်းအသင်းများနှင့်လည်း သည်အကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်သည်။ စာရေးသူကျွန်တော်သည် ဆရာဝန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ စာရေးသူခံယူရ မည့်အနေဖြင့်မူ လူချစ်စိတ်ဓာတ် အဓိကထားရပေလိမ့်မည်။ မှန်ကန်ပါသည်။ လူမျိုးမခွဲခြားရ၊ ဘာသာ မခွဲခြားရ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မခွဲခြားရ။ လူကိုလူလို သဘောထားကာ အကြင်နာဖြင့် ဆေးကုသပေးရပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ အခြားအသက်မွေးဝမ်းမှု ပြုသူများအနေဖြင့်ရော၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်နေကြသူများရော၊ မည်သည့်စိတ်ဓာတ်ကို အဓိကထားကြရပါမည်လဲ။ စာရေးသူအဖြေ မပေးတတ်ခဲ့ပါချေ။ ကံအားလျော်စွာ ထိုစဉ်အခါ (၁၉၈၅)ခုက မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းအဟောင်း တစ်ခုထဲမှ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးသော ဆောင်းပါးဟုပင် ထင်ပါသည်။ မိန့်ခွန်းမဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အတွေးအမြင်ကတော့ အသေအချာဖြစ်ပါ၏။
ဗိုလ်ချုပ်က သည်လိုဆိုထားပါသည်။ 'ကွန်မြူနစ်တွေက ကမ္ဘာကြီးကို အထက်အောက်ပိုင်း ကြည့်နေကြတယ်။ ပစ္စည်းရှိနဲ့ ပစ္စည်းမဲ့၊ ပညာတတ်နဲ့ ပညာမဲ့ဆိုပြီး ပိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ ဂျာမန်တို့ ဂျပန်တို့ကျတော့လည်း ကမ္ဘာကြီးကို ဒေါင်လိုက် စိတ်မြင်နေကြပြန်တယ်။ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ မြန်မာ၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်အစရှိသဖြင့် မြင်နေကြပြန်တယ်။ သည်လိုအထက်အောက်ပိုင်း ကြည့်ခြင်းတို့၊ စိတ်မွှာကြည့်ခြင်းတို့ဟာ လူတန်းစားစစ်ပွဲ၊ လူမျိုးရေး စစ်ပွဲတွေဆီကို ဦးတည်ပေးလိမ့်မယ်။ လူကိုလူလို့ပဲမြင်ထားမှသာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖြစ်ထွန်းပေလိမ့် မယ်'လို့ ရေးထားခြင်းကို ဖတ်ခဲ့ရပေသည်။ သည်ခါမှသာ စာရေးသူသည် ဉာဏ်အလင်း ပွင့်သွားတော့သည်။ စာရေးသူ၏ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို ပြတ်သားစွာ ထင်မြင်မှုပေးနိုင်ပေတော့သည်။
စာဖတ်သူများ သိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် တစ်နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အရာရှိကြီးတစ်ဦး(အမည်ကို မေ့နေပါသည်) နှင့် ဗိုလ်ချုပ်တို့ စကားပြောကြစဉ်က ပြောခဲ့သော စကားများ။အင်္ဂလိပ်က "ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခင်ဗျားက အင်္ဂလိပ်ကို တော်တော်မုန်းတယ်နော်"ဗိုလ်ချုပ်က "ကျွန်ုပ်ကအင်္ဂလိပ်ကို မမုန်းပါဘူး။ ဗမာပြည်ကို လာရောက်ပြီး သွေးစုပ်ခြယ်လှယ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်ကိုသာ မုန်းတာပါ။ အကယ်၍ ဗမာလူမျိုးအချို့က အဲသလို သွေးစုပ်ခြယ်လှယ်မှုမျိုးတွေ လုပ်နေ တာတွေ့ရင်လည်း အဲဒီဗမာတွေကိုလည်း တော်လှန်ရမှာပါပဲ"။ပြတ်သားလှပါသည်။ ရှင်းလင်းပါသည်။ ခိုင်မာပါသည်။
သည်အချက်များကို ထောက်ရှုကြည့်လျင်ဖြင့် နိုင်ငံရေးလုပ်သူဖြစ်စေ၊ ဆရာဝန်ဖြစ်စေ၊ အခြားအသက်မွေးမှုနှင့် လုပ်ကိုင် နေထိုင်သူဖြစ်စေ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် အဓိကထားရမည်လား၊ လူချစ်စိတ်ဓာတ် အဓိကထားရမည်လား၊ ကွဲပြားလောက်ပြီဟု ယူဆမိပါသည်။အမျိုးဘာသာကို အလေးထားရမည်။ မှန်ပေသည်။ မိမိလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းကြရမည်။ မှန်ပေသည်။ မြတ်နိုးကြရမည်။ တန်ဖိုးထားကြရပါမည်။ယနေ့အခါတွင် မျိုးချစ်စိတ်ဟု စကားလုံးသုံးရတော့မည့် ကာလမဟုတ်တော့ချေ။ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဟုသာ အသံကျယ်ကျယ်ပြောရမည့် ကာလဖြစ်သည်။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည့် ကာလဖြစ်သည်။ မျိုးချစ်၊ မျိုးချစ်ဟု လူမျိုးတိုင်းက အော်ဟစ်နေလျှင် တိုင်းပြည် မငြိမ်းချမ်းနိုင်။ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း မငြိမ်းချမ်းနိုင် . . .
သို့ရာတွင် မိမိလူမျိုးကသာ မြတ်သည်။ မိမိဘာသာကသာ မှန်ကန်သည်။ မိမိယဉ်ကျေးမှုကသာ သိမ်မွေ့သည်ဟု တစ်မျိုးတည်းမျိုး၍ တစ်ယူသန်နေလျှင်မူ မျက်ကန်းမျိုးချစ် ဖြစ်ပေတော့မည်။ အမြင်ကျဉ်း နေပေတော့မည်။ လူမျိုးဆိုသည်မှာ အဓိကမကျ။ ဘာသာမှာလည်း ယုံ ကြည်ရာ ကိုးကွယ်ပေလိမ့်မည်။ သူ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သူ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုယ် သိမ်မွေ့နေကြပေလိမ့်မည်။ အမြင်ကျယ်ကျယ်နှင့် မြင်ပေးတတ်ဖို့ လိုပါမည်။ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို မြတ်နိုးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း ပြုလုပ်ရမည်မှန်သော်လည်း အခြားသူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုလည်း မစော်ကားအပ်ချေ။ အပြန်အလှန် လေးစားကြရပေလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓက သက္ကာယအယူဖျောက်ရန်၊ အတ္တကိုပယ်၍ အနတ္တကိုရှုမြင်ရန် မြွက်ကြားခဲ့ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲရုန်းကန်နေစဉ် ကာလကပင် ဗမာ့တပ်မတော်ကို ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်၊ ၎င်းနောက် ဗမာ့ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်ဟုသာ အမည်ပေးခဲ့သည်။ မျိုးချစ်တပ်မတော်ဟု အမည်မပေးခဲ့ချေ။
တရုတ်ပြည်မှ မော်စီတုန်းသည်လည်း ပြည်သူ့လွှတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ဟုသာ အမည်ပေးခဲ့သည်။ မျိုးချစ်တပ်မတော်ဟု အမည်မပေးခဲ့ချေ။ ယနေ့အခါတွင် မျိုးချစ်စိတ်ဟု စကားလုံးသုံးရတော့မည့် ကာလမဟုတ်တော့ချေ။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဟုသာ အသံကျယ်ကျယ် ပြောရမည့်ကာလဖြစ်သည်။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည့်ကာလ ဖြစ်သည်။ မျိုးချစ် မျိုးချစ်ဟု လူမျိုးတိုင်းက အော်ဟစ်နေလျှင် တိုင်းပြည် မငြိမ်းချမ်းနိုင်။ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း မငြိမ်းချမ်းနိုင်။
လူအားလုံးကို လူလို့သာ တန်ဖိုးထားကြရမည်။ Globalization ဖြစ်တည်နေသောကာလတွင် လူသားအားလုံးကို တန်ဖိုးထားရုံသာမက အခြားသောသက်ရှိများနှင့် သက်မဲ့သြကာသလောကကြီးကိုပင် တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းကြရပေလိမ့်မည်။မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်သည် သာမညနေရာတွင်ထား၍ လူချစ်စိတ်ဓာတ်ကို အဓိကအနေဖြင့် မွေးမြူကြရပေလိမ့်မည်။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားရေးအမြင်နှင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်များ ရှင်သန်ကြရမည်ဖြစ်သော်လည်း လူချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြင့် နှလုံးသားတွင် ကိန်းအောင်းကြမှသာ ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်ထွန်းပေလိမ့်မည်။
WRITTEN BY ဒေါက်တာလှိုင်မိုး WEDNESDAY, 27 JUNE 2012 12:15
Posted: 28 Jun 2012 03:28 AM PDT
According toanew study out of St Vincent's University Hospital in Dublin, Ireland, overweight and pre-diabetic men who went onaweight loss programme were able to reduce the prevalence of low testosterone levels by almost 50 per cent.
Men who carry extra weight have been shown to have lower levels of testosterone, the hormone responsible for men's sex drives. Low levels of testosterone can also cause conditions like erectile dysfunction.
For the study, presented this week at the The Endocrine Society's 94th annual meeting in Boston, researchers observed about 900 pre-diabetic men who were also overweight, with an average age of 54.
With exercise andasensible eating plan, the prevalence of low testosterone decreased 46 per cent throughout the year. The same couldn't be said for participants who were put on the diabetes drug or the placebo groups, as their levels of testosterone remained largely unchanged.
Men put on the lifestyle modification treatment lost an average of about 8 kg over the year, which not only increased their body's production of testosterone but also reduced the risk of diabetic progression.
3. Adakah pemilihan dan pembelian aset pertahanan selari dengan Dasar Pertahanan Nasional agar aset yang dibeli dengan wang rakyat tidak menjadi 'gajah putih' seperti satu ketika dahulu apabila kereta kebal ringan dipasang sistem meriam yang tidak sesuai, kesediaan peperangan (combat readiness) pesawat pejuang yang pincang sistem senjata dan yang terbaru ini dengan sistem NCO yang tidak disiapkan mengikut jadual dengan peralatan enjin aplikasi yang tiada dalam pegangan kontraktor?
Posted: 28 Jun 2012 04:32 AM PDT
Posted: 28 Jun 2012 01:44 AM PDT
ဒါ့အပြင် ဦးထွန်းခင်က – ပြီးခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခအတွင်း ရိုဟင်ဂျာ အနည်းဆုံး (၆၅၀) သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ အနည်းဆုံး (၁၂၀၀) လောက် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၊ ရွာ (၂၂) ရွာနဲ့ ဗလီ (၁၄) ခု မီးရှိူ့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ရိုဟင်ဂျာ ရှစ်ထောင်ကျော် နေရာပြောင်းရွှေ့ ခံရကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလှေ အနည်းဆုံး (၁၆) စင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လက်မခံဘဲ ပြန်နှင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ညမထွက်ရ ကာဖျူးအမိန့်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်မှာသာ သက်ရောက်နေကြောင်း ဗြိတိသျှ ပါလီမန် အမတ်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Posted: 28 Jun 2012 02:01 AM PDT
"Tindakan ini juga membuktikan mereka tidak menghormati pilihan rakyat, hanya ingin menang pilihan raya dengan apa-apa cara," kata Khalid. -KD
Posted: 28 Jun 2012 12:24 AM PDT
It can often be difficult to know when people are being truthful with you. When people want to makeagood impression, they make an effort to hide facts about them that they are not very proud of. However, these facts may be the very information that you need in order to decide whether of not you should associate with this person. These facts may also color the decisions that you make
Posted: 28 Jun 2012 12:22 AM PDT
Viral marketing has becomearespectable and most importantly, very effective means of marketing among businesses worldwide – that's if it is done correctly and respectfully. Correctly and respectfully? What does that mean? It means not abusing the system. It means using viral marketing tactics to spread the word about your business, your product and your service without offending others or
Posted: 28 Jun 2012 12:20 AM PDT
If you're like I am, then when you hear thatanew guide for World of Warcraft Cataclysm has come out, and is the best thing since sliced bread (or perhaps Darnassus Marzipan), then you are inclined to take it withagrain of salt. I have only occasionally seenaguide live up to its hype in every way. Which is why I was very pleasantly surprised by IWinButtons – A Definitive Guide to Macros and
Tinnitus retraining therapy, or TRT, isapossible treatment option for those suffering from tinnitus. It was first used in the late 1980's by Pawel Jastreboff,aneurophysiologist asaway to reduce tinnitus symptoms. It has now becomeawide spread treatment method. It uses counseling to helpapatient understand why their tinnitus means and how they can deal with their symptoms. Part of